छोरी भएरै जन्मेको कारण बुवाले हेला गरेकी पुजा शर्मा कसरी बनिन् चर्चित नायिका ? (भिडियो हेर्नुस्) – Khabaarpati
January 4, 2021 goodmamLeaveaComment on छोरी भएरै जन्मेको कारण बुवाले हेला गरेकी पुजा शर्मा कसरी बनिन् चर्चित नायिका ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । अहिलेकी चर्चीत नायीका हुन् पुजा शर्मा । उनी नेपाली सिने क्षेत्रमा ब्यस्त नायीका पनि हुन् । पछिल्लो समय नायीका शुष्मा कार्कीसंगको विवादका कारण पनि उनी चर्चामा छन् ।२०४९ साल वैशाख १८ गते सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेकी उनको बाल्यकाल देखि नै संघर्षपूर्ण भए । बुवाले छोराको चाहना राखेका र उनी छोरी भएर जन्मेका कारण पुजा र उनकी आमा दुर्गाले जिवनमा कहिल्यै परिवारवाट माया पाएनन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
श्रीमानवाट माया पाउन नसकेका कारण उनले छोरी पुजालाई भने राम्रो भविष्य दिने सोँच बनाइन् । त्यसैले उनी घर परिवार छोडेर छोरीलाई लिएर काठमाडौं आईन् । पुजाले जन्मेदेखि नै बुवाको माया पाउन सकिनन् । उनलाई आमा दुर्गाले नै आमा र वुवाको माया दिइन् । दुर्गाले पुजालाई कहिल्यै पनि बुवाको कमी महशुष हुन दिइनन् ।
आमाले पुजालाई काठमाडौंमा ल्याएर राम्रो विद्यालयमा भर्ना गरिन् । अनि आफुले निकै मेहनत गरेर पैसा कमाउन थालिन् । उनले छोरीलाई राम्रो भविष्य दिन निकै संघर्ष गरेर पैसा कमाइन् । उनले एसएलसी पास गरेपछि पढाईसंगै एउटा एनजिओमा पनि काम गर्न थालिन् ।
उनले आफ्नो जिवनमा एउटा मोड आएको थाहा पाइन् । उनलाई पढाई भन्दा पनि उनलाई अरु काममा रुचि लाग्थ्यो । नाच्ने र अभिनय गर्ने काम गर्न उनलाई मन पराउँथिन् । उच्च शिक्षा पढ्न क्यानडा गएकी उनी पढाइ पुरा नगर्दै फर्किइन् । उनले टुरिजम फिल्डमा लागेर पढ्न र काम गर्न थालिन् । पुजा सानै देखि सुगम पोखरेलको फ्यान थिइन् । पछि उनै सुगमलाई भेटेपछि अभिनय तर्फ उनको पहिलो पाइला अघि बढाइन् । तर त्यतीबेला उनलाई आफैले गरेको अभिनय भने त्यती मन पर्दैनथ्यो ।
म्युजिक भिडियोमा समेत काम गर्न लागेकी उनी केही समय पत्रकारीतामा पनि लागिन् । त्यतीबेला उनलाई थ्रि लभर्स चलचित्रमा काम गर्ने अफर आयो । उनले चलचित्रमा काम गरिन् तर कसैले उनलाई नोटिस गरेनन् । उनले आफुलाई सुनाए अनुसारको कथामा अभिनय गरेको दृष्य नदेखेपछि उनलाई फिल्म क्षेत्रवाट नै मन भाँचियो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
त्यस पछि उनी सुदर्शनको संगतवाट चत्रचित्र मधुमासमा काम गरिन् । त्यसपछि भने उनको जिवन फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । तर त्यो चलचित्र त्यती चलेन । सुदर्शनले फेरी पुजालाई अवसर दिए । यसरी बारम्बार पुजालाई अवसर दिएर पुजासंग नायककै रुपमा सुदर्शन खेलेपछि दुई जनाको नाम पनि जोडियो । लगातार ३ वटा फिल्म खेल्दा पनि असफल भएपछि उनी हरेस खाएकी थिइन् । तर उनलाई आमाले नै हौसला दिइरहिन् ।
पछिल्लो चलचित्र शुदर्शनले प्रेमगित बनाए, त्यसमा फेरी पुजालाई नै खेलाए । यो चलचित्रले पुजाको लागि फिल्मको ढोका खुल्यो । उनका फ्यान बढे, चलचित्र पनि राम्रो चल्यो । यसरी उनी चलचित्रमा एउटा स्थापित नायीका बन्न थालिन् । छोरी भएका कारण बाबुवाट अपहेलित भएकी उनै पुजा अहिले नेपालको चर्चीत नायीका बनेकी छन् ।
यसरी महाकाली नदीमाथि भारतले बनायो बाँध, फेरि रुवायो दार्चुलावासीको उठीबास हुने खतरा (हेर्नुहोस भिडियो)
यी ७ नेपाली नायिकाः जसले चलचित्रकर्मीलाई नै बनाए जोडी
March 17, 2021 goodmam
लामो समयपश्चात् ‘छक्का पन्जा-३’ आज युट्युबमा सार्बजनिक, हेर्नुहोस समय
आमाबुवा बन्दै २३ वर्षपछी एकसाथ सिनेमाको पर्दामा शिव श्रेष्ठ र गौरी मल्ल